PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-08 - NoSANDILE MCHUNU
athi zizimisele ngokuthi zithole imali eyevile kumashumi amabili ezigidi zamarandi ukuze zimdedele uDolly.
Pho yini eyinkinga ngoba wonke umdlali unesamba adayiswa ngaso lokhu ngesilungu okubizwa ngokuthi i-prize tag? Inkinga ukuthi ngokwenkontileka yalo mdlali oshaye into ecokeme kuma-Olympics ngonyaka ofile kumele adayiswe ngemali eyizigidi eziyishumi nambili zamarandi, abazithamundayo basho njalo. Ngokwemibiko, iSundowns ithi kwakuyiphutha lokho, kwenzeka ngesikhathi bembolekisa kwi-Ajax Cape Town ngemuva kokumthenga kulona leli qembu laseKapa.
Labo mpetha be-Absa Premiership bathi isamba okumele lidayiswe ngaso leli nxele izigidi ezingaphezu kancane kwamashumi amabili zamarandi.
Isidididi seSundowns sesenze lolu daba lwangenwa nayinyunyana yabadlali i-Safpu njengoba izama ukusiza lo mdlali. Iyanda nemibiko ethi nenhlangano esingethe ibhola emhlabeni i-Fifa kungase kudingeke ingenelele ukuze iluxazulule.
Kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke konke lokho ikomiti
labaxazululi abangaphansi kwe-Premier Soccer League kusamele liyifakele izibuko nalo le mpicabadala. Asazi iyozala nkomoni kodwa asethembe ukuthi okuzokwenzeka ngeke kucekele phansi ibhola likaDolly.
Sonke siyakhumbula ukuthi yini eyenzeka kuPapi Zothwane ngemuva kokuthi kube nomdonsiswano ngaye phakathi kweKaizer Chiefs neLamontville Golden Arrows. Yize agcina esayina kwiSundowns kodwa akaphindanga wabuyela ezingeni ayekulona esagijima kuBafana Bes’thende.
Kumfundi ofisa ukuphawula ngalengosi engenza njalo ku-Twitter: @Sandile0808 noma kwie- mail: stmchunu@yahoo. com. USandile Mchunu umethuli wezemidlalo kwaeNCA ophikweni lwezindaba zesiZulu ezikhonjiswa kwieKasi Plus kwi-Open View HD.